Xavi oo qiray inuu isku diyaarinayo shaqada Tababare ee Barcelona, xilli shaki uu soo galay mustaqbalka Quique Setien – Gool FM
(Barcelona) 29 Juun 2020. Halyeyga Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa si cad u sheegay in isaga iyo caawiyeyaashiisa ay qorsheynayaan la wareegista xukunka Kooxdiisii hore.
Tababaraha hadda hoggaamiya Al Sadd ayaa horraantii sanadkan la la xiriiriyay inuu noqdo macallinka Barca kaddib ceyrintii Ernesto Valverde, balse kooxda reer Spain ayaa magacaawday Quique Setien maadaama Xavi uu iska diiday doorka macallinka ee garoonka Camp Nou.
Maadaama Barcelona ay qaadaneyso maalmo xambaarsan bandhig liita, sidoo kalena ay lumisay hoggaanka horyaalka La Liga, waxaa soo if baxay muran ka dhex aloosan xiddigaha kooxda iyo Macallin Setien, taasoo horseed u noqotay in shaki badan uu isku meero mustaqbalka macallinka reer Spain.
Majaladda Sport ayaa baahisay shir jaraa’id oo uu muuqaal ahaan u qabtay Xavi oo ka hadlaya mustaqbalkiisa iyo suuro-galnimada uu Barcelona ku maamuli karo.
“Rajada ugu weyn ee aan leeyahay hadda waa inaan noqdaa macallinka Barca, waddada guulahana aan ku soo celiyaa” ayuu yiri kabtankii hore ee Blaugrana.
“Waxaan ahay nin kooxda u sameysan, waxaana jeclaan lahaa inaan ku soo laabto xilliga habboon, si aan mashruuceyga uga soo billaabo eber.
“Dhowr jeer ayaan sheegay, balse waxaan doonayaa inaan go’aannada ugu muhiimsan aniga aan qaato” ayuu hadalkiisa ku daray 40-sano jirka Isbaanish-ka ah.
Xavi oo 767 u ciyaaray Barcelona ayaa qiray inuu bishii Jannaayo ee sanadkan uu la kulmay madaxda naadiga La Liga difaacaneysa, sidoo kalena uu iska diiday heshiis labo sano iyo bar ah, isagoo u arkayay xilli ay adag tahay in la qabto xilka tababarennimo ee Barca.